दलित र सिल्पी शब्दको अन्तर्य – Tanahun Khabar
लेखक जनार्दन नेपाली ‘वियोगी’
नोट : दलित वा शिल्पी संगठनको विरोधीमा वा समर्थक म होइन । हाल नेपालमा दलित संगठन र नेता कार्यकर्ता बीच दुई वटा शब्दमा अलि नमिठो विवाद भईरहेको देखिन्छ ।
एउटा दलित र अर्काे सिल्पी । म यी दुवै शब्दको समर्थक वा विरोधी होइन । बरु विवाद गर्नुभन्दा संगठनको नाममा “दलित/सिल्पी” राखेर भएपनि यो पँधेरे विवाद बन्द गर्नु उचित हुन्छ भन्ने सल्लाह दिई रहेको छु । तर दलित शब्दका पक्षपातीहरु माने पनि सिल्पी पक्षका साथीहरू पटक्कै मानिरहेका छैनन् । उनीहरु भन्छन् दलित शब्द खारेज गर्नुपर्छ । के हो त यी दुई शब्दहरूको अन्तर्य आउनुहोस छलफल गरौँ ।
भारतीय प्राचीनकालको अन्त्य र मध्य कालको सुरु तिर शहर कसरी बस्यो भनेर आजभोली एघार बाह्र कक्षाका इतिहासका विद्यार्थीहरूलाई पढाइन्छ ।
जस्मा पहिले मन्दिर बन्यो खुल्ला ठाँउमा, त्यस मन्दिरमा तिर्थयात्रीहरू आउने जाने हुन थाल्यो । मानिसहरूको भिडभाड भएको देखेपछि ब्यापारीहरू र सिल्पकारहरुरू आउन थाले । ब्यापारीहरू सामान बेच्न आउथे र सिल्पकारहरू आफ्नो कला सिप प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गरी ब्यापारी वा तिर्थयात्रीहरूलाई बेच्न आउँथे । यसरी मन्दिरको आसपास बस्ती बस्यो र पछि शहरको निर्माण भयो ।
जस्मा ब्यापारी र सिल्पकारको भूमिका रह्यो भनेर पढाइँदो रहेछ । सिल्पकार भनेको सवै प्रकारको सिप, सवै जातिको सिपलाई भनिन्छ । बत्ति काट्नु धुप बनाउनु टपरी खुट्नु चन्दन पोको पार्नु अविर प्याकेट पार्नु देखि काठको ढुंगाको मूर्ति बनाउनु आदि सवै सिल्प कला भित्र पर्दछन् ।
अत : सिल्पकार भित्र सवै जाती र दलितको सिप पर्छ भने दलित भित्र अन्य जातीका बाहेक दलित सिल्पकारहरू मात्र पर्दछन् ।
भारत सरकारले दलित शब्द नभन्न प्रदेशका हाइकोर्टहरूलाई निर्देशन दियो र मुम्वाई हाइकोर्ट लगायतले प्रतिवन्धको आदेश समेत गरे । सरकारले दलित शब्द प्रयोग नगरी अनुसुचित जाती भनेर दलितलाई सम्बोधन गरेको छ संविधानमा । कारण के होला ?
डा. भिमराव अम्वेडकरको बर्षाैंको मेहनतले दलित संगठन विशाल बन्न पुग्यो । जागरण बढ्यो, दलितहरुले सत्ताबाट पाएको भनिएको केही प्रतिशत आरक्षण हो । त्यो आरक्षणको पनि अन्त्यको लागि उच्च जात भनिएका समुदायले कडा विरोध गरिहेका छन् ।
दलित शब्दको उत्पत्ती नेपाल भारतमा प्रजातान्त्रिक संविधान नबन्दै अझ भनौँ भारतको संविधान समेत नवन्दै, दलित संगठनको सुरुवात नै नहुदैँ, जति बेला शुद्र शब्द प्रचलित थियो, भारत र नेपालमा पनि । अतः इ.स. १९२९ मा भारतका महाकवि सुर्यनाथ निरालाले आफ्नो कवितामा प्रयोग गरेका थिए ।
उनको कविताको अंश जस्ताको तस्तै :
तुम्हारी शक्ति बरुणा ।
यस कवितामा प्रयोग भएको दलित शब्दको अर्थ शुद्र हैन दलनमा परेको दीन दुखी प्रति करुणा गरी उपकार गरियोस भनिएको थियो ।
त्यसको धेरै पछि सर्वप्रथम मुम्वाईमा “दलित प्यान्थर्स मुम्वै” भन्ने एउटा समाज सेवा संगठन बन्यो । यो पनि शुद्रहरूको संगठन थिएन । दुखी गरिब दलनमा परेकाहरूको सेवा गर्ने संगठन थियो । पछि यस संगठनले सामाजिक आन्दोलनको रुप धारण ग¥यो । प्यान्थर्सको अर्थ एक प्रकारको चितुवा हो ।
त्यसपछि भारतमा बृटिस सरकार भारत छोड आन्दोलन आदि सुरू भयो । पार्टी संगठनहरू बन्ने क्रम बढ्यो । भारतमा अम्वेडकरहरुरूले अछूत समुदाय समेट्न दलित नाम राखेर संगठित गरे, संगठन बनाए ।त्यहाँ दतिल शब्दको अर्थ अछूत थिएन, दलनमा परेको भन्ने नै थियो । नेपालकै इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति संगठन थियो । जहाँ दलित शब्द थिएन । टेलर्स संगठन आदिमा पनि दलित शब्द थिएन । भारतमा अखिल भारत विश्वकर्मा समाज, अखिल भारत विश्वकर्मा महासभा, अखिल भारत विश्वकर्मा सिल्पी महासभा आदी विभिन्न शुद्र समुदाय उपजाती आदीका सयौँ आ आफ्ना संगठन प्रान्तै पिच्छे बनेका छन् ।
चमार समुदायको छुट्टै छन् तर एउटै छाता संगठनमा ल्याउन नसकेको कारण छटपटिएका छन् । दलित नेताहरू जसलाई समेट्छ “दलित” शब्दले । दलित शब्दले त अछूत बाहेक राउटे लगायत चेपाङ्ग समेतलाई समेट्न सक्दछ । भलै त्यसो गरिएको छैन नेपालमा । मुम्बै हाईकोर्टको आदेश पालनमा गर्न भारतका दलितहरू किन मानिरहेका छैनन ?
सरकार र अन्य जातीहरू कार्यन्वयन गराउन जोड गरिरहेका छन् । नेपालमा त सरकार र अन्य जाती हैन कि स्वयं दलितकै मानिसहरु लागि परेका छन् । दलित शब्द हटाउन ? भारतको प्रमाण र अवस्था हेर्दा सिधै आरोप लगाउन मिल्छ, सरकार र अन्य जातीको चलखेल र षड्यन्त्र छ । तर त्यसो नहुन पनि सक्छ । बुझाईमा कमजोरी भएको हुन सक्छ, सिल्पी साथीहरुको । यसमा अझै अर्काे तथ्य छ भारतको विश्वकर्मा समाजले “देश और दुनियाँ” नामक युट्युव च्यानल मार्फत विश्वकर्माहरूको बारेमा विभिन्न सामाग्रीहरू प्रशारण गर्ने गर्छ । त्यसमा त्यस्तो सामाग्री समेत छ । युट्युवबाट सवैले हेर्न सकिन्छ ।
विश्वकर्माका पाँच पुत्र थिए । एक मनु, दुई मया, तीन, तोष्टा, चार सिल्पी, पाँच देवके । यी पाँच पुत्रका आ आफ्ना इष्ट देव रहेका छन् ।
१. मनुको इष्ट देव – विश्वकर्मा, स्वामी पिता भनौँ वा अरु हुनेछ । यो हो लोहार जस्ले फलामको काम गर्छ ।
२ मय — फर्निचर, ठेकी आदी बनाउने (चुनारा)
३. त्वस्टा — तामा पित्तल, सिलवरका भाँडा बनाउने टमटा÷ट्वाँटा
४. सिल्पी — पथ्थर, काठ धातुको मुर्ति बनाउने(आग्री)
५. देवके — सुनचाँदीको काम गर्ने सुनार ( स्वर्णकार)
यसरी स्पष्ट ब्याख्या गरेको छ ।
यस हिसावले त सिल्पी शब्दले विश्वकर्माको पनि आग्री समुदाय बाहेकलाई समेट्न नसकिने स्पष्ट हुन्छ । सिल्पी समुदायको २ वटा बाहेक अर्थ भएन १. कामी समुदायको आग्री या त सवै जातको सिप युक्त काम गर्ने समुदाय दलनमा परेका नपरेका सवै हुने भए ।
यो कि त आग्रीको मात्र संगठन भयो या त पार्टी भयो । जहाँ सवै जातका मानिस अटाउने । पार्टी पनि भनिएको छैन संगठन भनिएको छ । सिल्पी शब्द राखेर सवै सिल्पकार समुदाय समेट्ने गरी पार्टी बनाउन सकिन्छ ।
कतैबाट पनि यो सिल्पी शब्द उपयुक्त देखिदैन । दलित शब्द भनेको भारत र नेपालमा रहेका सम्पूर्ण कथित अछुत समुदाय र तिनका संगठन र संघर्षको साथै त्याग, तपस्या, बलिदान, सौर्य शहिद गाथा आदिको एकमुष्ट अभिब्यक्ति र संविधानअनुसार समानुपातिक समाबेशी सहभागितामुलक प्रतिनिधित्वको समेत र विशेष सुविधा जो दलित वृद्धबृद्धाहरूलाई थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ सवैलाई समेट्छ ।
जहाँसम्म शब्दको उच्चता र नीचताको द्योतकको कुरा छ । सिन्धुताई र पेले शब्दको अर्थ र उच्चता, नीचता बुझे हुन्छ । सिन्धुताई भनेको झुत्री आमा र पेले भनेको टालाको बल हो । सिन्धु ताईले १४०० अनाथ पालेकी छन् । ८०० भन्दा बढी सम्मानका मेडल छन् । पेले विश्वको प्यारो नाम र ब्राजिलको हरेक कम्पनी स्कुल, दुकानमा पेले नाम छ ।
सामन्त शब्द पनि सम्मान र आदर मात्र होइन उच्च आदरार्थी शब्द हो । अहिले के हालत छ यस शब्द को ? बहकिएर होइन गम्भिर भएर सोच्नुहोस सवै साथीहरुले । यदी सिल्पी शब्दको प्रयोग गरेर शुद्र द्योतक हुदैन भन्ने सोच्ने हो भने भारतमा महात्मा गान्धीले दलित सवैलाई रामको नाम दिए । किनकी रामले आफ्नो भक्त महिला( सर्किनी महिला) बावरीको जुठो बयर खाएकाले कथित अछुतहरूलाई राम नाम दिने भनेर घोषणा गरे ।
दलितहरू खुशी भएर नामको पछाडी राम लेख्न थाले । तर भारतमा अहिले नामको पछाडी राम आए पछि यो शुद्र हो भनेर अपहेलना सुरु गर्छन् । क.आहुतीले भने जस्तो दिमागको सुई डाउन भईहाल्छ । सिल्पी संगठनले समेट्ने त अछुतलाई होला कि सवै लाई समेट्ने हो संगठनमा ? सवैलाई समेटे पार्टी हुन्छ वा गैर दलित संगठन बन्छ । दलितलाई समेट्ने हो भने शिव सेना राखे पनि कामी सार्कीको संगठन भन्न सुरु भईहाल्छ ।
यो शब्दले होइन, दिमागको डाउन गर्ने सुईलाई डाउन हुन नदिने राज्य ब्यवस्था र सहभागिता खोज्न दिमाग लगाउँ । धन विद्या र सत्तामा हामी बरावरी कसरी हुने त्यतातिर सोचौँ । छलफल गरौँ बाद विवाद गरौँ स्वस्थ्य तरिकाले । यो पधेंरे विवाद बन्द गरौँ । तथ्यलाई स्वीकार नगर्नु कित स्वार्थ कित अज्ञानता बाहेक तेस्रो अर्थ हुदै हुदैन ।